maung yu py | လမ်းအိုလေး
Tag Archives: maung yu py
ဂေါ့ထ်ဖားသားရုပ်ရှင်နဲ့ မလုံလောက်ဘူးထင်လို့ (မောင်ယုပိုင်)
ဂေါ့ထ်ဖားသားရုပ်ရှင်နဲ့ မလုံလောက်ဘူးထင်လို့ ထူးထွေဆန်းပြား ဂျိန်းစဘွန်းရုပ်ရှင်တွေ ကြည့်တယ်
ဂေါ့ထ်ဖားသားရုပ်ရှင်နဲ့ မလုံလောက်ဘူးထင်လို့ ရင်သပ်ရှုမောဖွယ် ကြယ်တာရာစစ်ပွဲရုပ်ရှင်တွေ ကြည့်တယ်
ဂေါ့ထ်ဖားသားရုပ်ရှင်နဲ့ မလုံလောက်ဘူးထင်လို့ ရင်တမမ ကြာပွတ်မင်းသားလူစွန့်စားရုပ်ရှင်တွေ ကြည့်တယ်
ဂေါ့ထ်ဖားသားရုပ်ရှင်နဲ့ မလုံလောက်ဘူးထင်လို့ ဆာမူရိုင်းတွေဓါးသိုင်းတဲ့ရုပ်ရှင်တွေ ကြည့်တယ်
ဂေါ့ထ်ဖားသားရုပ်ရှင်နဲ့ မလုံလောက်ဘူးထင်လို့ ကောင်းဘွိုင်တွေသေနပ်ချင်းယှဉ်ပစ်တဲ့ ရုပ်ရှင်တွေ ကြည့်တယ်
ဂေါ့ထ်ဖားသားရုပ်ရှင်နဲ့ မလုံလောက်ဘူးထင်လို့ ဆိုင်ကိုလူသတ်ကောင်ရုပ်ရှင်တွေ ကြည့်တယ်
ဂေါ့ထ်ဖားသားရုပ်ရှင်နဲ့ မလုံလောက်ဘူးထင်လို့ အံ့ဖွယ်သရဲ စူပါမင်း၊လင်းနို့လူသားနဲ့ပင့်ကူလူသား စူပါဟီးရိုးရုပ်ရှင်တွေ ကြည့်တယ်
ဂေါ့ထ်ဖားသားရုပ်ရှင်နဲ့ မလုံလောက်ဘူးထင်လို့ သွေးစုပ်ဖုတ်ကောင်နဲ့မကောင်းဆိုးဝါးရုပ်ရှင်တွေ ကြည့်တယ်
ဂေါ့ထ်ဖားသားရုပ်ရှင်နဲ့ မလုံလောက်ဘူးထင်လို့ အနာဂတ်ကမ္ဘာမှစက်ရုပ်များအန္တရာယ်တော်လှန်ရေးရုပ်ရှင်တွေ ကြည့်တယ်
ဂေါ့ထ်ဖားသားရုပ်ရှင်နဲ့ မလုံလောက်ဘူးထင်လို့ မိတ်ဆွေဂြိုဟ်သား(သို့)ကမ္ဘာဖျက်ဂြိုဟ်သားအန္တရာယ်ရုပ်ရှင်တွေ ကြည့်တယ်
ဂေါ့ထ်ဖားသားရုပ်ရှင်နဲ့ မလုံလောက်ဘူးထင်လို့ ဘလက်ဟိုးနဲ့ပိုးတီကောင်တွင်းဖြတ်ပြီးသွားတဲ့ အာကာသခရီးရုပ်ရှင်တွေ ကြည့်တယ်
Categories: Kabyarz | Tags: မောင်ယုပိုင်, Kabyarz, maung yu py, modernist poetry | Permalink.
အမြဲတမ်း သစ္စာပန်း (မောင်ယုပိုင်)
Categories: Kabyarz | Tags: မောင်ယုပိုင်, Kabyarz, lanolay, maung yu py, modernist poetry | Permalink.
(မြှားနတ်မောင် – နိုဝင်ဘာ၊ ၂၀၀၂)
Categories: Kabyarz | Tags: ဝေးခေါင်, Kabyarz, lanolay, maung yu py, Way Khaung | Permalink.
(ရယ်စရာ – အောက်တိုဘာ၊ ၂၀၀၃)
(စတိုင်သစ် – ဇွန်၊ ၂၀၀၄)
(ဟန်သစ် – ဇန်န၀ါရီ၊ ၂၀၀၄)
Categories: Kabyarz | Tags: မောင်ယုပိုင်, Kabyarz, lanolay, maung yu py | Permalink.
မောင်ယုပိုင် Censorless [External Links]
တူ့ မိုင်ဒီးယား ဖလင်း
့ခေါင်မိုးနီအိပ်မက်တွေ
ရွှေနိုင်ငံ ဘိတ်(ဆုံး)မြို့တွင် နေ(မထိ)ထိုင်(မသာ)ခြင်း
လူကြီး / လူကောင်း
Categories: Kabyarz | Tags: မောင်ယုပိုင်, censorless, Kabyarz, maung yu py, modernist poetry | Permalink.
ကြားကြားချင်းကဆို နောက်နေသလိုပဲ။ ဘယ်ခင်မောင်အေးလဲ။ တို့ခင်မောင်အေးတော့ မဖြစ်နိုင်ဘူး။ မသေနိုင်ဘူး။ သေမယ့်ကောင် မဟုတ်ဘူး။ နာမည်တော့ သေပြီ။ လူရော။ လူလည်း သေပါပြီ။ သေပါပြီကွာ။ အတည်ဆိုပေမယ့်လည်း ငိုလိုက်ရကောင်းမလား။ လက်တို့တာ စောင့်နေမိသလား။ ငိုစရာ ပါလို့လား။ ဘာလို့မပါရမှာလဲလို့ လူမှုရေးအရ ငါ့ကိုယ်ငါ လက်တို့လိုက်တာလား။ ဥပမာ ဒီမြို့က အပေါင်းအသင်းတွေက တို့နှစ်ယောက်ကို တွဲပြီး သိထားကြတာကို။ မင်းကိုတွေ့ရင် ငါ့ကိုမေးမယ်။ ငါ့ကိုတွေ့ရင် မင်းနဲ့မင်းအကြောင်း မေးမယ်။ ဒီလိုပဲပေါ့။ မတွေ့တာ နှစ်နဲ့ချီသွားတော့လည်း ဒီကောင် ရန်ကုန်မှာ ရှိနေတယ်ပေါ့။ အခု နာရေးကြော်ငြာ ဖတ်ပြီးပြီ။ ရက်လည်ဆွမ်း စားပြီးပြီ။ ရေဝေးမှာ မီးခိုးဖြစ်သွားတဲ့အထိ သူ့ဓာတ်ပုံတွေ ကြည့်လိုက်ရပြီးပြီ။ ငါ့စိတ်ထဲမှာတော့ ဒီကောင် ရန်ကုန်မှာပဲပေါ့။ Continue reading →